ဒေါသ: H14 / H24
အသုံးပြုမှု - အသွားအလာအတွက်ဆလိုက်ဆန့်ကျင်ပန်းကန်၊ အဆောက်အအုံအလှဆင်ဘုတ်၊ ဟာ့ဒ်ဝဲကိရိယာသေတ္တာကိုယ်ထည်ပြား
Tread plate (Anti-slip aluminium plate) ကိုပုံစံပြုအလူမီနီယမ်အပြားဟုလည်းခေါ်သည်။ တန်ဖိုးကြီးခေတ်မီသောပစ္စည်းများနှင့်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။
၁။ ငါးဘားအလူမီနီယံနင်းတုံးပြား - ၅ ဘားမချောသောအလူမီနီယံပြားသည်မိုးမခပုံစံပုံသွင်းပြားနှင့်လူမီနီယံအလွိုင်းကွက်ပြားများဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သော Skid Skid စွမ်းရည်ရှိပြီးဆောက်လုပ်ရေး (ကြမ်းပြင်) ပလက်ဖောင်းဒီဇိုင်းနှင့်အခြားရှုထောင့်များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ အလူမီနီယမ်ပြား၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပုံစံများကိုခုံများနှင့်ခုံးပုံစံ ၅ ခုနှင့်အပြိုင်စီစဉ်ထားသည်။ ပုံစံတစ်ခုစီသည်အခြားပုံစံများနှင့် ၆၀-၈၀ ဒီဂရီထောင့်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်ဤပုံစံသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆန့်ကျင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအလူမီနီယံပြားအမျိုးအစားကိုများသောအားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရေငုပ်သင်္ဘောတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းမှာကောင်းမွန်သောနှိမ်နင်းခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးစျေးသက်သာသည်။
2. သံလိုက်အိမ်မြှောင်လူမီနီယံအလွန့်နင်းပန်းကန် - ငါးချောင်းများနှင့်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်မချောသောအလူမီနီယံပြား။
၁။ သာမာန်အလူမီနီယမ်အလွန့်နင်းထားသောပန်းကန် - အလူမီနီယမ်အလွိုင်းနင်းပန်းကန်ကိုအခြေခံအဖြစ် ၁၀၆၀ အလူမီနီယံပြားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပုံမှန်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်စျေးနှုန်းနိမ့်သည်။ အများအားဖြင့်အအေးသိုလှောင်ခြင်း၊ ကြမ်းခင်းနှင့်အပြင်ဘက်ထုပ်ပိုးမှုများသည်ဤပုံစံကိုအလူမီနီယမ်စာရွက်အဖြစ်အသုံးပြုသည်။
2. လူမီနီယမ်အလွိုင်းနင်းပြား: အဓိကကုန်ကြမ်းအဖြစ် 3003 နှင့်အတူလုပ်ငန်းများ၌။ ထိုသို့သောအလူမီနီယမ်ပြားကိုသံချေးသတ္တုပြား ဟူ၍လည်း ခေါ်သည်။ ၎င်း၏အင်အားသည်သာမာန်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းပုံစံပြားထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ၎င်းတွင်သံချေးမွမ်းမံမှုအချို့ရှိသော်လည်းမာကြောခြင်းနှင့်ချေးခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် ၅ စီးရီးပုံစံပြားပြားများသို့မရောက်ရှိနိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ထုတ်ကုန်ကိုထရပ်ကားပုံစံများနှင့်အအေးသိုလှောင်သည့်ကြမ်းခင်းများကဲ့သို့တင်းကြပ်သောသံချေးမကာကွယ်ရေးတွင်အသုံးပြုသည်။
၃။ Aluminum-magnesium အလွန့်နိုက်တုံး - နို့တိုက်စားခြင်း၊ မာကျောခြင်းနှင့်သံချေးခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကုန်ကြမ်းအဖြစ် ၅ စီးရီးအလူမီနီယမ်ပြား ၅၀83 မှထုတ်လုပ်သည်။ အထူးသဖြင့်စိုထိုင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိသင်္ဘောများနှင့်အခန်းမီးများကဲ့သို့သောအထူးနေရာများတွင်အသုံးပြုသည်။ ထိုသို့သောအလူမီနီယမ်ပြားသည်မာကျောမှုနှင့်မြင့်မားသောဝန်ကိုခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။
ရှေ့သို့ မော်တော်ယာဉ်ပေါ့ပါး applications များပစ္စည်း